Warbixinada sirta Maraykanka ee la daabacay - BBC Somali
Warbixinada sirta Maraykanka ee la daabacay
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya daabacadii kumanyaal warbixino dimlomaasiyiinta maraykanka ay leeyihiin oo sir ah ee lagu daabaxcay barta internetka ee Wiki Leaks.
Warbixinada lagu daabacay barta internetka ayaa waxaa ka mid ah in Boqor Cabdalla ee Sacuudi Carabiya uu ku guubaabiyay Maraykanka inuu weeraro saldhjiga nucliyeerka ee Iran.
Warbixinada la daabacay waxaa ka mid ah, meel ay Israel ugu sheegayso masuuliyiinta Mraykanka inay Israel la tashadeen Masar iyo dowladda falastiiniyiinta inataysan Gaza weerarin sanadkii 2008da dhamaadkiisii.
Warbixinada waxaa ka mid ah mid sheegaysa sida uu Maraykanka uga walwal san yahay musuqmaasuqa ka jira Afganistaan.
Warbixinta ayaa sheegaysa, in hayadda ka hortaga daraaga ee Maraykanka ay heshay madaxweyne ku xigeenka Afganistaan oo lacag dhan konton iyo laba million oo dollar ay boorso ama shandad ay ugu jirto.
Dalka Afganistaan, Masuul Maraykan ah ayaa wuxuu qoray in Madaxweyne Hamid Karzai walaalkii Axmed Wali Karzai, in lagu yaqaano inuu sameeyo musuqmaasuq, kana ganacsada Daraaga.
Warbixinada lagu daabacay barta internetka ayaa waxay sheegayaan in Maraykanka uu si qarsoodi ah u baarayo dadka u shaqeeya Qaramada Midoobay.
Warbixinada oo sidoo kale lagu daabacay wargayska Guardian ee ka soo baxa Britain, David Leigh oo ka tirsan wargayska Guardian ayaa BBCda u sheegayy in warbixinadan ay dadka u baahan yihiin si ay u ogaadaan sida ay dowladaha u fikiraan.